Maraoka: Fandraisana an-tànana ny fikarakaràna ny biby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2009 17:30 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Italiano, Español, Français, македонски, English
Hopitalim-biby any Fez, Maraoka, izay nitsàngana tamin'ny 1920 ny American Fondouk novatsian'ny Sosaity any Massachusetts ho fisorohana ny herisetra atao amin'ny Biby [Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals](MSPCA). Ilay hopitaly, izay mikarakàra ny biby lehibe sy kely, dia ahitàna voalohany indrindra mpitsabo biby sy mpiandraikitra Maraokana, na izany aza, vao haingana izy no tafàkatra teo amin'ny tontolon'ny fitoraham-blaogy noho ny ezaka fitoraham-blaogy nataona mpitsabo biby vahiny, Dr. Dan Biros avy any Boston. Dr. Biros, izay mpitsabo manokana momba ny mason'ny biby, dia nandràkitra an-tsoratra ny asany tao amin'ny Fondouk tao amina blaogy ofisialy. Tsy ela akory izay dia namaofivaofy tao amina lahatsoratra iray ny olana misy eo amin'ny biby any Maraoka izy:
Tsy dia mazava amiko loatra hoe hatraiza ny fahaizan'ireo Marokana manana biby fiompy mikarakàra tsara ireo bibiny. Manerana ny tany ny fifandraisan'ny biby sy ny olombelona, nefa misy fahasamihafàna ara-kolotsaina raha ny momba ny fikarakaràn'ny tsirairay ny biby fiompiny. Hita n'aiza n'aiza ny herisetra atao amin'ny biby ary izany no antony nanangànana ny American Fondouk efa ho maherin'ny 80 taona lasa izay. Resy làhatra aho fa tsy mitsahatra ny manampy ny vahoaka eo an-toerana ny mpiasan'ny Fondouk mba hahafantàrany ny tokony hatao hikarakaràna ny biby amin'ny fotoana rehetra. Tsy asa mora izany. Miasa manome ohatra ry zareo. Mahavelom-bolo ny mahita izany isaky ny maha-eto ahy.
Tamin'ny alina farany nijanonan'i Dr. Biros tany Maraoka dia nanoratra izy:
Amiko, ny paradisa dia tsy ny mahatanteraka ny faniriana sy manàla ny zava-dratsy rehetra ho anà olona iray; fa ny fanomezana sy ny fandraisana, ny fifanakalozana fanomezana na bitika izany na goavana. Ny paradisa dia ny fanamarinantsika fa mpandray anjara mavitrika isika, amin'ny fara-herintsika, eto amin'ity tany toa adaladala ity ary milona tanteraka ao anatin'izany amin'ny làlana rehetra diavina. Na ahoana na ahoana no famaritan'ny olona ny paradisa, tsapako fa ny ampahany amin'izany famaritana izany dia faniriana ny haharetan'io paradisa io.
Farany, manoratra momba ny zava-niainany nandritra ny alina farany nijanonany tany Fez ny Dr. Biros:
Nasaina fianakaviana ‘berber’ iray hisakafo hariva sy hiaraka amin-dry zareo izaho sy Alicia androany hariva. Rangahy mpivarotra karipetra, vahiny tanteraka aminay vao nifankahita taminay ny omalin'iny tany Medina, no nanàsa anay hihinana akoho nokarakaraina miaraka amin'ny couscous [chicken couscous], hisotro dite ary hiresadresaka. Teo ny vadiny sy ny zanany vavy roa ary nasian'ilay zokiny indrindra sarina ‘henna’ ny sandry sy ny tànan'i Alicia. Ny Henna dia sarisary fanaingoana fanao any India sy Arabia efa an-taonjato maro. Niresadresaka momba ny fianakaviana sy ny asa izahay, ary niara-sakafo tanaty vilia baolina lehibe tokana tahàka ny efa fomba fanao tany Maraoka, hatrizay, samy nampiasa ny sotrony avy izahay.
Tsotsotra ilay efitrano nefa nisy izay ilaina rehetra, lakozia, efi-trano fandraisam-bahiny ary efi-trano fandriana. Ahafàhana mahita tsara an'i Medina koa ny ‘terrasse’-ny, ka rehefa eny ianao dia toy ireny tantely kely anaty tohotra [avy amin'ny mpandika: ny tohotra dia tranon-tantely] lehibe ireny. Satria izahay nijery ny ivelan'ilay tanàna dia nahatsapa tokoa fa tena tongasoa izahay ety ary tsapanay koa fa tena lavitra ny tranonay izahay. Im-piry ny zavatra toy izao no hiseho any Boston? Mampidonàka ny takariva manontolo aty, sady mahafanina no mitondra fahatoniana ihany koa. Izany ka paradisa.
M’a ssalama (fandriampahalemana ary veloma)
Hosodoko tao amin'ny American Fondouk
Ny mpitoraka ao ambadiky ny Près du Puits koa dia tsy ela akory izay no nanoratra momba ny Fondouk, izay nitondràny ireo sàkany hatao vaksiny. Miteny izy:
Misy toerana mahafinaritra, majika mihitsy aza, any Fez. Ny American Fondouk io, hopitalim-biby natsàngan'i Sidney Haines Coleman, izay mikarakàra ara-pahasalamana ireo biby miasa any Maraoka. Efa ho 100 taona lasa izay, ny Fondouk – izay midika hoe ‘hotely’ amin'ny teny Arabo – dia mbola mikarakàra maimaim-poana biby an'arivony isan-taona. Maro amin'ireo biby miasa – soavaly vavy sy boriky -, nefa koa ny sàka sy ny alika (na dia mieritreritra aza aho fa tsy mbola nikarakàra betsaka tamin'ireo ry zareo nandritra ny taona 1920).
Nizara sary maro momba ny Fondouk sy ireo tsaboiny koa izy:
Biby tsaboina ao amin'ny American Fondouk